Archive du 20170110
Marc Ravalomanana Tafaverina ny fiarany
Miverina tsikelikely amin�ny tompony ireo fiaran�ny orinasa Tiko sy ny fianakaviana Ravalomanana nisy naka na nandroba tao anatin�ny fanonganam-panjakana 2009, taorian�ny antso nataony tamin�ny taon-dasa hamerenana ny fananan�ny Tiko nisy naka.
Kajikajy politika Fifidianana depiote no hatao mialoha...
Ankatoky ny fanomanana ny fifidianana eto amin�ny firenena isika amin�izao fotoana izao
Fifidianana filoham-pirenena Hajao ny lal�na, hoy ny KMF CNOE
Andro main-tany ihany no tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena dia ny faran�ny taona 2018, hoy ny tompon�andraikitra avy eo anivon�ny komity mpanara-maso ny fiainam-pirenena na ny KMF CNOE, Raharisoamalala Patricia.
Pety Rakotoniana � Mpamafy lainga i Mahafaly Olivier �
Nitondra ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena i Pety Rakotoniaina, filoha nasionalin�ny Antoko Tambatra, omaly.
Rajoelina sy ny MAPAR Tsy vonona ny hihavana mihitsy
Nasehon�i Andry Rajoelina sy ny vondrona MAPAR tarihany tamin�ny tsy fahatongavan�izy ireo teny Iavoloha nandritra ny lanonana fifampiarahabana ny zoma 6 janoary lasa teo indray fa tsy vonona ny hihavana izy ireo.
Taratasin�i Jean Manampatra sahady ?
Manakory indray ry Jean a ! Fa ahoana ihany no hanaovantsika ity taona ity e ? Ny debanareo anie, hono, mba te hanao azy hoe �fisandratana� e !
Tsy fahampian'ny rotsak�orana Ritra ny reniranon�Ikopa
Tafakatra hatrany amin�ny 31�C ny maripana ambony indrindra eto Antananarivo. Tsy ampy ny rotsak�orana, izay misy fiantraikany betsaka amin�ny fiainan�ny mponina mihitsy. Ritra hatramin�ny reniranon�Ikopa
Me Razafimanantsoa Hanitra Nanolotra ordinatera ho an�ny Boriborintany I
Nanolotra solosaina miisa dimy miaraka amin�ny kojakoja ho an�ny Boriborintany voalohany, omaly alatsinainy 9 janoary, ny solombavambahoaka voafidy tao amin�ny Distrika Antananarivo I, Me Razafimanantsoa Hanitra.
Sendikan�ny mpiasam-panjakana � F3M � Tsy faly amin-dRajaonarimampianina
Tsy nahomby ary tsy nahafa-po ny mpiasam-panjakana ny kabarin�ny Filoham-pirenena nandritra ny lanonam-be fiaraha-misakafo noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2017 natao teny Iavoloha ny 6 janoary teo.
Zandary sy dahalo Hihamafy ny gidragidra
Hihamafy ny gidragidra ! Izay no azo ilazana ny fifandonana eo amin�ny zandarimariam-pirenena sy ny dahalo mpangalatra omby manerana ny nosy amin�ity taona 2017 ity raha ampifandraisana ny tatitra avy eo anivon�ny zandarimariam-pirenena mikasika ny vokatra tamin�iny 2016
Antananarivo Adiny 3 ny delestazy halina
Nampiteny ny moana ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo Renivohitra omaly.
Me Hanitra Razafimanantsoa Nirotsaka nanadio an�Analakely
Nanatanteraka fanadiovana faobe teny amin�ny boriborintany voalohany omaly alatsinainy 9 janoary 2017 ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena sady solombavambahoaka voafidy teny amin�ity
� Salon de l��tudiant � Hatao ny 12 sy 13 janoary izao
Mbola betsaka amin�ireo tanora vao afa-panadinana Bakal�rea hatreto no tsy mahita na mahalala akory izay sekoly ambony azo antoka tokony hanohizany ny fianarany.
Tranom-printim-pirenena Fahombiazana ny taona 2016
Fahombiazana tanteraka ny taona 2016 ho an�ny tranom-printim-pirenena etsy Ambatomena.
Alamino tsara e !
Na dia mbola misy ihany aza ny fifampiarahabana isaky ny faran�ny herinandro noho ny taom-baovao dia efa fotoanan�ny asa tanteraka amin�izao herinandro faharoan�ny volana janoary izao.